Wall cabinet 1 door
> Household wear>Wall cabinet 1 door
Including gas tube holder and removable front base to easy changing gas tank ဂက်စ်အိုးဆက်သွယ်ထားသည့်ကြိုးအား ထားသိုနိုင်သည့်အပြင်၊ အလွယ်တကူ ဂက်စ်အိုးသိမ်းလဲနိုင်ရန်အတွက်လည်း ဖြုတ်တပ်နိုင်သည့် အရှေ့အောက်ခြေပါရှိသည်။
Ks 68,000 tax incl.
Including gas tube holder and removable front base to easy changing gas tank ဂက်စ်အိုးဆက်သွယ်ထားသည့်ကြိုးအား ထားသိုနိုင်သည့်အပြင်၊ အလွယ်တကူ ဂက်စ်အိုးသိမ်းလဲနိုင်ရန်အတွက်လည်း ဖြုတ်တပ်နိုင်သည့် အရှေ့အောက်ခြေပါရှိသည်။ Hanging cabinet with 1 door. တံခါး (၁)ချပ်နှင့် နံရံကပ် မီးဖိုချောင်သုံးဗီရိုဖြစ်သည်။ Size: W50*D30*H45 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၅၀၊ အနံ ၃၀၊ အမြင့် ၄၅ စင်တီမီတာ Including wall mount နံရံကပ်စကူလ်ပါဝင်သည်။